Harargee Bahaa ardaa Gurusm hedduu ya Soomalii kutanii jedhan, bulchiinsii aanaa ammoo lafa Oromiyaa mallatteessinee kennuu dinnee jedha
Hagayya 12, 2017
Bulchiinsii aanaa Gursum lafa teenna kunnee hin kenninu jedhee mallatteessuu dide
Jiraattotii aanaa gursum hiriira bahanii akka laftii isaanii cittee hin kennamen iyyatan
Falamaan daarii Oromiyaatii fi Soomalee Booranaa haga Harargeetti waan bara hedduu asi deemaa bahe.
Kaan laftii akka gaafa referendemii durii baateen jiraachuu maltee jedha.Kaan ammoo riferendemiin sun akka dansaa qajeeltee hin baane jedha.
Akka dhadhagahuutti jirrutti Harargee Bahaatii fi Harargee Dhiyaatii arddaa 27 Soomalee kennan,
Fakkeennaa aanaa Gursum ganda 7-8 dhiyoo tana bulchiinsa naannoo Oromiyaat fi federaalaa mallatteessee naannoo Soomaliitii kenne.
Araddaan Harargee Bahaa amma Soomalii kennan jedhan Kulmiyyee, Nooleeyyee,Wara Ali, Warra Guuyee, Bakakkaa, Qoree, Resiisii fi Fariyyee.”
Araddaa wal dhaba qabu kana nama 10,000 keessa jira.
“Ganama kana bakka Qoree jedhamtu alaabaa Oromiyaa buusanii ganama saati 12 jechuu ka somaalee baasanii,eebba geggeefataa jiran.Laftii nuu kennamte jedhanii gammachuutti jiran.Bulchaa aanaatti didee malee godinaa fi Oromiyaa fi federaalii mallatteesse. Ummatii ammoo hiriira bahee jira” jedha namii Gursumii dubbifne.”
Muusaa Ahmed itti gaafatmaaa dhimmi nagaa aanaa Gursumiiti.Akka innii jedhutti araddaan amma jedhan kun cuftii duruu handhuraa Oromiyaati.Bulchiinsii isaaniilleen tanaaf mallatessee Soomaliif kennuu dide.
“Murtaahee kennamee jedhamee maqaadhaan nu hin geenne. Laftii tun duraan falmaallee hin qabdu. Araddaan amma maqaa dhahame kun durumaan keenya,” jedha.
“Murtii araddaa kennuu kun Qoree irratti murtoofte waan jehu qofa argine,”jedha obboo Ahmed.
Akka warrii lafaa jedhutti akkuma laftii ta Soomaliu jedhanii mallatteessaniiniin waraanii naannoo Shanii dhufee lafa fudhatee ummatilleen irratti qubate.
Tana irratti aanaa Gurusm,Baabbille keessatti kalee fi hardhallee wa hadhan jedhan.Cinaaksenilleen dhibuma akkanaa keessa jirti dhagahumatti jirra.
Obboo Nagarii Leencoo itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo mootummaa federaalaati.
Wal dhaba Oromiyaa fi Soomalee irratti koreen hojjachuutti jiraa taatullee laftii akkuma duruu riferendemiin kennaniin teetti jedha,
“Reiferemndiin kan kaahame ala mootummaan naannoo Oromiyas tahee federaallii lafa ummatii Oroimyaa irra jiraatu kan ummata Oromo tahe kan dabarsee naannoo Somaaleef sababiin kennuuf hin qabu.Akkuma kanaas ammoo lafa referendemiin gara naannoo Somaalee warra citan mootumama amma federaalaa tahee qaamii kamiiyyuu jechuudha gama naannoo Oromiyaatti kan dangesuu akka hin taane beekamuu qaba.”
Falii guddaan ammoo akka obboo Nagariitti “Osoo dhiigni tokko hin dhangala’in lubbuun nama tokkoo odoo hin dabrin rakkoon jiru sirriitti namoota daandgaa san beekan wajjiin hojjachuundahaan yeroo barbaachisaa hunduma fudhachuun nageenyaan daangaan akka hojjamtamu mootummaan qabatee akka hojjachuutit jiru jechuudhaa.”
“Tanumaafuu gandootii duraanis aanaa Oromiyaa jala turan ammas taanana Oromiyaatti akka daangeffaman beekamu qaba,”jedha obboo Nagariin.
Wal dhaban daangaa tana irratti akka jiraattotii jedhanitti dubbii lafaa tana irratti ya wal hadhanillee.
Embaasiin Amerikaa Finfinnee jirulleen karaan Finfinnee haga Jijjigaa deemu wal dhabuma kanaan cufamee jedhee akka lammii Amerikaa garas chochoone dhaamate.
Mootummaan Itoophiyaa ammoo lolii jedhan kun hin jiruu isuma koree hujii daarii baasuu hojjatte hadhan jedha.